Cheap Foring zvikamu simbi simbi fekitari uye bhizimisi | Ouzhan
"Punch tsvuku" iri chaizvo inopisa extrusion maitiro. Iyo simbi isina simbi tsvuku punch yekugadzira inofa inoda kushandisa simbi-yakasungwa simende carbide. Hukukutu hwesimbi-yakasungwa cemented carbide yakaderera pane iya ye cemented carbide, uye kukanganisa kwayo kuomarara kuri nani pane kwesamende carbide. Zvakare, simbi-yakasungwa cemented carbide inogona kugadzirwa kutanga uye nekudzimwa.
Stainless simbi tsvuku punchi yekuchengetedza-chaiyo simbi isina simbi yekugadzira zvikamu zvikamu uye zvikamu
Simbi-yakasungwa cemented carbide haingori chete ine simba rakakwira, kuomarara, asi zvakare inogona kugadziriswa neakasiyana machining uye kupisa kwemagetsi, uye ine kuomarara kwakanyanya kwesamente carbide (mushure mekudzima uye kupisa, inogona kusvika (68 ～ 73) HRC, yakakwira pfeka kuramba Naizvozvo, inokodzera kwazvo kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana.Zvisinei, nekuti cemented carbide uye simbi-yakasungwa simende carbide inodhura uye ine hurombo kuoma, zvakakodzera kushandisa inoisa kuti itaridzike muforoma kuti iwedzere hupenyu hwehupenyu hwehuvhu uye chengetedza Zvinhu uye kudzikisira mutengo. Nekuda kwehunhu hwesimbi isimbi, vatengi vazhinji vane tsika yekushandisa simbi isina chinhu kugadzira zvikamu, uye zvakanakira zviri pachena.
Zvakanakira Ouzhan Stainless simbi tsvuku yakadhindwa ekugadzira zvikamu
- Makemikari zvivakwa: Kemikari kuramba uye electrochemical ngura kuramba ndiyo yakanakisa musimbi, yechipiri chete kune titanium alloys.
- Mechiniki zvivakwa: Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzesimbi isimbi, michina zvimiro zvakasiyana. Martensitic simbi isina simbi ine simba rakasimba uye kuomarara, uye inokodzera kugadzira zvikamu zvinodziya ngura uye zvinoda simba rakakura uye yakasimba yekupfeka kuramba, senge hydraulic turbine shafts uye simbi isina chinhu. Mapanga, simbi dzesimbi dzesimbi, nezvimwewo, austenitic simbi isina chinhu ine mapurasitiki akanaka, kwete simba rakakwira asi yakanakisa ngura kuramba pakati pesimbi dzesimbi. Iyo inokodzera nguva dzinoda chaizvo kuramba ngura asi yakaderera michini zvivakwa, senge makemikari zvinomera uye mafetiraiza zvirimwa. Zvishandiso zvemidziyo, sulfuric acid, hydrochloric acid vagadziri, nezvimwewo, chokwadika, zvinogona zvakare kushandiswa mumaindasitiri emauto senge submarines. Ferritic simbi isina simbi ine zvine mwero michina zvimiro uye yakaderera simba, asi inopokana neiyo oxidation uye inokodzera akasiyana mafekitori emoto zvikamu.
- Maitiro ekuita: Austenitic simbi isina simbi ine yakanakisa maitiro maitiro. Nekuda kwepurasitiki yayo yakanaka, inogona kugadziriswa mumahwendefa akasiyana siyana, machubhu uye mamwe ma profiles, akakodzera kumanikidzwa kugadzirisa. Simbi isina chinhu yeMartensitic ine mashoma maitiro ekuita nekuda kwekuoma kwakanyanya.
- Chimiro chekutsvuka kwekunamatira hachiganhurirwe nechitarisiko chekunze chechikamu chechigadzirwa pachacho.
OEM yakagadzirirwa simbi isina simbi sevhisi-China Shanghai yekugadzira zvikamu zvisina simbi zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, inogona kugadzirisa simbi isina simbi ine yakatsiga uye yakavimbika yepamusoro-chaiyo yekugadzira zvikamu. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakakwana kwesimbi isina simbi yekugadzira zvikamu. Uye zvakare, iyo yakapihwa Kugadzira zvikamu zveesimbi simbi zvigadzirwa zvinoteerera nemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa inokwikwidza simbi isina simbi CNC yekuchengetedza zvikamu zvemitengo masevhisi kune edu akakosha vatengi.
Kushandiswa kwesimbi isina simbi tsvuku yakatsikiswa kugadzira zvikamu
Kune isina simbi zvikamu zvinoda kugadzirwa kwakawanda, tsvuku punch yekugadzira inoshandiswa kuwanda kugadzirwa, kuchengetedza kugadzirwa kutenderera uye mutengo.
Ndezvipi zvinoshandiswa nesimbi isina simbi yekugadzira zvikamu
304 Stainless simbi castings anoshandiswa zvakanyanya mukuvaka Hardware uye zvezuva nezuva Hardware, asi mune zvakanyanya zvinoparadza maindasitiri kana yegungwa mhepo, zvakanakisa kushandisa 316 simbi isina simbi.
Kune zvidimbu zvidiki zvine zvakakwirira zvinodiwa, tsvuku punch yekuchengetedza inogona kushandiswa mukugadzira kwakawanda, iyo inokodzera zvemishini michina uye zvezuva nezuva zvinodikanwa nezvidiki zvidimbu.
Zvakanakira simbi isina simbi yekuchengetedza zvikamu basa
- Zvese zvakagadziriswa Kugadzira zvikamu zveesimbi simbi zvigadzirwa zvinoenderana nekuomarara kwemhando yekutarisa.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana masampuli ekugadzira chaiyo simbi isina simbi yekugadzira zvikamu.
Pashure: Yakasarudzika kabhoni simbi ndokugadzira zvikamu
Zvadaro: Yakasarudzika simbi isina simbi yakagadzira zvikamu zvemuchina zvikamu